Posted: Waxabajjii/June 5, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments
Dabaabrraa bikka ka’aniif gayuuf, miilaan karaa Ta’iz sossoohan. Ta’izzirraa karaa Zabiidiin Mansuur keessaan Hudeeydaa qaxxaamuranii, warri amnitti miilaa akkaa gara dhoorkite, magaalaa timjii biyya Su’uudii, tan Jiizaan ja’amtu gayan. Jiizaanirraa Hijaaz keessaan dabranii Xaa’if seenan. Yaroon karaa kanarra deemaa turan Bona ture. Biyya gammoojjii tan lafti isii Bona hanqatee Ganna ibidda tuftu, guyyaa nama dhokochaa, odoo halkan dukkana keessa tiratanuu, aman miilaa kan ji’a sadihii tiin Xaa’if gayan. Xaa’if irraa makiinaa yaabbatanii, baatii Eblaa tan bara 1951, Makka seenan.
Wanni Sheekni naannoo sanitti Oromoof hojjate keessa kan jalqabaa raadiyoona biyya sanii keessaan sagantaa Afaan Oromoo jalqabsiisu. Bara 1965 raadiyoon soomaalee Afaan Oromoo tiin dabarsuu kan jalqabe tattaafata Sheek Mahammad Rashaad godheeni. Sheekni sagantichi maqaa afaan Gaallaa akka qabaatu fedhe. Garuu diddaa alagaa fii nama keenyaarraa itti xixxeen maqaa afaan Qottuu tiin dabruu jalqabe. Sheekni Qottuurraa Gaallaa filatee kan qabsoo godheef waaltina sabaa uumuu dhaaf ture. Akka Sheekni galmeessetti, bara 1968, gaafa Jeneral Kabbadaa Gabree, ajajaan waraana mootummaa Hayle Sillaasee, biyya Soomalee dhufe, yaadaa fii komii Ziyaad Barreetiif dhiheesseen sagantaan afaan Qottuurraa gama afaan Gaalla’aa-tti geeddarame. Sheekni haala kanarraa akkaan gammade. Gammachuu isaatiis akka aramaa gadii kanatti walaloon galmeesse.
Abdurashiid Abdurahmaan (Abbaa Urjii)
Waxabajjii 02, 2013